Home Wararka Kheyre Iyo RW ku Xigeenkiisa oo aan Salaanta kala qaadin. Sabab?
Kheyre Iyo RW ku Xigeenkiisa oo aan Salaanta kala qaadin. Sabab?
Labadii toddobaad tagtay waxaa jiray iska horimad xoog leh oo dowladda Farmajo u dhaxeeyey kaas oo keenay inay laba u kala jabto dowladda, dhalisayna inaan waxba socon oo wax waliba ay cakiran yihiin. Sida MOL soo warisay waxaa uu R/W la hadlay Safiirada Yurub oo u u sheegay inaysan wax lacag ah haysan oo ay dowladda cabsi xooggan soo wajahday.
Haddaba maanta waxaa soo bxaya in lagu dagaalay Lacago badan oo laaluush ah oo ila kala duwan ka yimid Sidii loo qeybsan lahaa lacagaha hawl fudueynta ah ee ka imanaya shirkadda SOMA IOL and GAS, iyo qandaraasyo kala duwan oo ku soo dhacay xafiiska R/Wasaaraha. Arrinkaan ayaa waxaa uu dhaliyey muran iyo is qabqabsi xoog leh oo u dhaxeeya koox RW lasafan oo iyagu qaatay qeyb buuran iyo Koox la safan R/Wasaare K/xigeenka Mahdi M Guleed Khadar oo aan waxba la siinin.
MW Farmajo ayaa waxaa uu isu keenay Kheyre iyo Khadar laba jeer si uu u heshiisiiyo, laakiin waa ku guuleysan waayey, walisa kama uusan daalin si ceebta loo asturo. Hasa yeeshee waxay dhibtu ka jirtaa kadib markii uu R/Wasaaraha ku adkeystay inuu isaga yahay cidda go’aamineysa lacagahan laaluushka iyo cidda wax laga siinayo. Khadar ayaa dad ku dhow waxay ka soo wariyeen inuu leeyahay ‘kama yeelayo inuu hadda isaga wada qaato waxa la helo hadhowna aan dambiga dhaca qaranka wada yeelanno.”
Labadan “mas’uul” ayaa la leeyahay salaanta iskama qaadaan goobna isuguma yimaadaan, waayo RW Kheyre waxaa uu go’aansaday in la eryo Khadar waxaanu dad saaxibadiis ah ku yiri “Annagaa Xamar ku hayna markaas ayuu nagu qabanayaa waxaan annagu ka soo shaqeynay oo soo bisleynay”. Tan oo u muuqata Khadar loogu hanjabayo. RW waxaa ka go’an inuu RWKX Xamar ka eryo si uu Itoobiya ugu noqdo madaama uusan tagi Karin Somaliland.
Xamar waxaa hadda a socota xiisad dad badani ay kula safteen oo xildhibaanada Dirta ah ay kula safteen RWKX Mahdi Guleed Khadar, tan oo si aad ah uga careysiiysay Kheyre waxaana la soo sheegayaa inuu codsaday liiska Xildhibaanadda lacagta dheeraadka ah lagu siiyo in loo keeno si uu uga jaro ama ay isaga u soo raacaan kuwa jira buuqaan.
Khadar waxaa kale oo u ka xanaaqay inaan qofna loogu soo darin shirka London ee lagu xaraashayo Shidaalka Somaliya ee 7 Febraayo 2019 dhacaya. Shirka waxaa loo soo dirsaday Laba kheyre ilma adeeradiis ah oo ka wakiil ah isaga oo kala Maxamuud Xaji Maxamediyo Cabdi dheere. Sidoo kale MW Farmajo ayaa waxa ka wakiil ah oo aan qalin warqad la saari Karin, boorsana la furin haddii uusan xaadir iyo Ogol ahayn Karar Dhoomey oo uu horay uga sii dhigtay agaasimaha guud ee wasaaradaas waana ina adeerkii. Wafdiga Waxaa lagu soo daray Dr. Cabdullahi Xeydar oo ah aqoonyahan Joolagiste ah balsa loogu talagalay in wax laguu khaldo ee diidmo iyo ogol toona lagama rabo.
Isku soo duub labadii xaaraan ku heshiisaa xalaasha ayey ku dagaalaan xaalka Khadar iyo Kheyre waa sidaas oo wuxuu qarka u joogaa inay isku feeraan laaluush, Soma iol iyo Qandaraasyo lacago xaaraan ah oo ka timid sidii dalka loo shidaalkiisa loo xaraashi lahaa.